Fahavaratra any Berlin, inona no hatao ary ahoana no hankafizanao | Vaovao momba ny dia
Fahavaratra any Berlin, inona no hatao ary ahoana no mankafy
Mariela Carril | | Berlin, soso-kevitra
Mihamamiratra hatrany ny masoandro any amin'ny Ila Bolantany Avaratra ary manomboka mafana ny tanàn-dehibe mangatsiaka. Berlin dia iray amin'izy ireo, na dia tsara vintana ho an'ny mponina aza dia tsy mahatratra ny hafanan'ny lafaoro toa an'i Madrid na i Roma.
Berlin dia tanàna misy fahavaratra kely na miaraka amin'ny fahavaratra tsy azo ihodivirana. Fa eny, raha tsara vintana ianao raha eo rehefa mafana dia afaka mankafy tanàna hafa misokatra sy malalaka. Ka indro zavatra vitsivitsy azonao jerena sy atao amin'ny fahavaratra any Berlin.
1 Ankafizo ny rano
2 Fetibe fahavaratra
3 Ankafizo ny sakafo any ivelany
4 Fitsangatsanganana ao Berlin
Ankafizo ny rano
Na dia tanàna tsy mifanatrika amin'ny ranomasina aza i Berlin, afaka misafidy ianao manatrika dobo filomanosana ampahibemaso na mifindra any amin'ny farihy akaiky. Ny iray amin'ireo dobo ampahibemaso atolotra indrindra dia Columbiabad, any Neukölln, satria manana habaka maintso manodidina azy sy trampolines 1 ka hatramin'ny 3 metatra ny haavony, sehatra iray hitsambikinana avy amin'ny folo metatra ny haavony ary solafaka.
Manana dobo maromaro izy io, ny sasany tena marivo azon'ny ankizy ankafizina, faritra ho an'ny ankizy, iray hafa hohanina ary mazava ho azy, ranonorana sy efitrano fanovana. Raha afaka mandeha mandritra ny fotoam-pianarana ianao dia tsara kokoa satria tsy hisy zaza. Ity site ity koa dia manana sauna sy ny zava-drehetra misokatra manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 8 alina ny be pitsiny.
Azonao atao ny miditra hatramin'ny adiny iray alohan'ny hanidiana azy nefa ny pisinina manidy antsasak'adiny alohan'io fotoana io ihany. Ny tahan'ny dia 5, 5 euro manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma mandritra ny adiny iray sy sasany ny fampiasana ireo dobo.
ihany koa misy dobo manokana, ny sasany mangatsiaka kokoa noho ny sasany toa ilay eo amin'ny terrasin'ny tranon'ny SoHo (ary izay tsy idiran'ny rehetra ...), ary ilay any Badeschiff, na dia tsy maintsy mandeha ianao vao maraina be mba hisorohana ny vahoaka ary hamarino toerana sy fandriam-pahalemana maraina.
Safidy iray hafa, voajanahary kokoa, ny manatona farihy fa raha tsy manana fiara ianao dia manjary sarotra. Ary koa, raha mieritreritra ianao fa feno dobo filomanosana ho an'ny daholobe dia miandrasa mijery ireo farihy. Indraindray izy ireo dia mipoaka! Ary mazava ho azy, tsy an'ny Karaiba ny rano. Mbola fantatrao ihany Schlahtensee na Weifensee na, kely lavitra, Liepnitzsee. Raha ny tokony ho izy dia fantaro aloha hoe firy ny olona ...
Farany, Berlin dia manana lakandrano maro ary afaka mandehandeha any anaty schauchboot tsotra sy tsotra ianao na misoratra anarana hitsidika. Orinasa fizahan-tany voatondro no BerlinBotsTouren, miaraka amina sambo kely ho an'ny olona 11 ihany. Azonao atao ny mandehandeha manamaky ny renirano Spree, ilay toerana misy ady maro mandritra ny Ady lehibe II, na amin'ny alàlan'ny rano milamina ao amin'ny Landwehrkanal.
Raha iray amin'ireo mpandeha miasa ianao izay te handray anjara amin'ny fiainan'ny tanàna dia tsy maintsy manatrika festival ianao. Ny tanàna eropeana dia misy fety isaky ny vanim-potoana ary tsy ankanavaka i Berlin, vao mainka aza raha miposaka ny masoandro!
El Diabe 1 meyNa dia efa nandalo aza izy io dia iray amin'ireo antoko be atao indrindra, na dia tsy mifanaraka tanteraka aminy aza ny teny hoe? Misy ny matso, diabe ary tantara maro. Toy izany koa ny MotzstraBenfest, ny Andro eny amin'ny làlan'i San Cristóbal, ny Fète de la Musique ary ny Fetiben'ny kolontsaina. Ity festival farany ity dia a hetsika kolontsaina marobe nitranga tao Neukölln sy Kreuzberg nanomboka tamin'ny 1996.
Karazana Fitiavana Parede, mozika techno, fianakaviana sy namana amin'ny loko rehetra, karazana ary fironana ara-nofo. Ny marina dia hoe raha kolontsaina marolafy dia tsara, ny tsara indrindra ho hitanao any Alemana. Tsy afa-maina tamin'ny fifanolanana, iza no namoaka ny hevitra, iza no mandamina azy, raha hatao ara-barotra na tsia, saingy he ... tohizina hatrany ny fankalazana azy io ary tsy tokony halainao izany.
El Andron'i Christopher Street Io no kinovan'ny Berlin Pride Parade vita amin'ny Kreuzberg. Ny "tsy fahita firy" na voaroaka ao an-tanàna dia mivory eto sy ny mifanohitra amin'ny iray hafa, tena itovizany, firaisankina no anton'izy ireo ka ny mpifindra monina sy ny mpitsoa-ponenana no ivon'ny sain'ny olona. Manohy ny lohahevitra pelaka na firaisana ara-nofo vitsy an'isa, misy ihany koa ny Motzstrabenfest, ao Schöneberg.
Hetsika fanao isan-taona izany ary tsy matso fotsiny fa maharitra faran'ny herinandro. Ny tanora, ny antitra, ny pelaka na ny heterosexual, izy rehetra dia mivondrona eto amin'ny toetra finaritra sy fandeferana amin'ny fahasamihafana. Loko maro, mamirapiratra be ... Io ve ilay Fète de La Musique mitovy? Tsy dia be loatra, rehefa dinihina tokoa, dia fialan-tsasatra eran'izao tontolo izao, izay ankalazaina amin'ny tanàna isan-karazany manerantany.
Raha avy ny orana dia tsy mahazo aina ka miankina amin'ny taona sy ny toetrany vao afaka mankafy an'io fetin'ny zom-pirenena sy ny fahasamihafana izay ankalazaina hatrany amin'ny 21 Jona. Ny antoko dia maharitra adiny roa na roa andro mihitsy aza. Tafiditra ao ny mandeha, mihomehy, mihira ary mandihy betsaka. Fetibe bebe kokoa? Ny tena varotra dia ny Pop-Kultur, ny fidinan'ny farihy, ao Weibensee, ny Nidina teny amoron'ny ony na ny Fetin'ny Tany Masina, adiny roa miala ny tanàna.
Ankafizo ny sakafo any ivelany
Raha afaka mihinana zavatra ianao, manaova barbecue ary manaova labiera vitsivitsy tsara kokoa, sa tsy izany? Ao amin'ny valan-javaboarin'i Körnerpark, Görli, Hasenheide, Tiergarten na Tempholf dia afaka manana barbecue ianao. Ary raha tsy manana grill ianao dia mankanesa any amin'ny fivarotana lehibe ary mividy ny barbecue efa vita hohanina. Tena azo ampiharina! ny Thai Park Toerana mahafinaritra ihany koa io, maka sandwich vitsivitsy, ohatra, satria vitsy ny olona ary miharihary ireo mpivarotra amoron-dalana mivarotra sakafo Thai milelaka rantsan-tànana.
ny spätis malaza sy malaza any Berlin izy ireo. Hain'izy ireo ny mivarotra sakafo sy zava-pisotro isan-karazany, na andro na alina, ary rehefa tonga ny andro mafana dia mametraka seza manodidina izy ireo hahafinaritra ny miresaka. Ny tanàna dia feno an'ity karazana ity kiosko gastronomika izay, soa ihany, dia mora.
Tonga eto ihany koa ny hetahetan'ny kalesy sakafo ka ny fahavaratra dia vanim-potoana misy fety sakafo: ny Fetin'ny fahavaratra Vegan, Ohatra, izy Fetin'ny Gastronomika any Berlin, ny Street Food Berlin na Markthalle 9, dia ohatra vitsivitsy.
Tsy hiala amin'ny lisitry ny fitsidihako ny seranam-piaramanidina taorian'ny ady izay nanjary Valan-javaboary Tempelhofer. Ho hitanao ny maritrano Nazia, làlambe taloha misy ny tranony fanaraha-maso ary olona maro mankafy fitsangatsangana. Raha manofa bisikileta na moped / scooter ianao dia afaka mihodina manodidina an'i Berlin araka ny itiavanao azy. Ataovy ao an-tsaina izany!
Fitsangatsanganana ao Berlin
Farany nefa tsy farany, afaka miala kely foana amin'i Berlin ianao ary hahafantatra ny manodidina azy. Ny bus sy ny lamasinina dia mifamatotra tsara ary mamela programa tsara. Azonao atao ny mandeha any Teufelsberg, mankany amin'ny Pfauueninsel na Spreewald tsara tarehy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Berlin » Fahavaratra any Berlin, inona no hatao ary ahoana no mankafy
Torohevitra hankafizana ny fialantsasatrao amoron-tsiraka
Fitsangatsanganana an-tongotra avy any Madrid mankany Havana amin'ny vidiny 640 euro fotsiny